Khilaaf Siyaasadeed oo tagaan Degaanka Somalida Itoobiya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Khilaaf Siyaasadeed oo tagaan Degaanka Somalida Itoobiya
January 23, 2019 January 23, 2019 Cali Yare732
Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaa Saaka ka taagan xaalad kacsanaan ah ka dib markii ay isku dhaceen Madaxweynaha dowladd degaanka iyo Madaxda sare ee dalka Itoobiya.
Khilaafka ayaa markii hore ka dhex bilowday Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha xisbiga talada dowlad degaanka Haya Axmed Shide, sidoo kalena ah Wasiirka Maaliyadda dalka Itoobiya, waxaana la isku qabtay Arrimo ku saabsan maamulida degaanka.
Golaha wasiirrada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu wadaa maanta inay isugu yimaadaan xarunta madaxtooyada, iyadoo magaalada Jigjiga laga soo sheegayo degganaansho la`aan siyaasadeed, kaddib markii madaxweyne Mustafe Muxumad Cumar shalay labo jeer looga yeeray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Madaxweyne Mustafa ayaa waxaa xilka madaxtinnimada dowlad degaanka loo doortay 22-kii August sanadkii 2018-kii.
Maxay tahay Sababta Waare iskugu Shaandheeyay Wasiiriidiisa?
Maxaa ka jira in Somalia laga lahaa Hubkii lagu fuliyay weerarkii Nayroobi?
Wafdi Balaaran oo maanta tagaya Hobyo
October 8, 2019 Duceysane
WAR MURTIYEED…. BEESHA SACAD (Dhismaha Galmudug)